प्रोकारियोटिक र युकेरियोटिक कोशिकाहरू | पोस्टपोस्ट
लौरा Torres प्लेसहोल्डर छवि | 18/05/2022 13:09 | पशुहरू, सेल जीवविज्ञान, मानिसहरु
के तपाईलाई थाहा छ कि आज सबै कोशिकाहरू एउटै साझा कक्षबाट विकसित भएका छन्? कोशिकाहरूको अचम्मको संसार, विज्ञानको एक विशेष शाखा, सेल जीवविज्ञान द्वारा अध्ययन गरिएको, हामीलाई जीवनको आधारभूत एकाइ: कोषका विशेषताहरू अझ राम्ररी बुझ्न अनुमति दिन्छ।
माइक्रोस्कोपीको मद्दतले, कोशिकाहरूको चर उपस्थिति र कार्यको वर्णन गर्न सम्भव छ, साथै तिनीहरूको आधारभूत गुणहरू बुझ्न, वैज्ञानिकहरूलाई दुई प्रकारका कोशिकाहरू बीच भेद गर्न अनुमति दिन्छ: prokaryotes र eukaryotes। यहाँ हामी तपाईंलाई युकेरियोटिक र प्रोकारियोटिक कोशिकाहरू बीचको भिन्नता र कोशिकाहरूको संसारको बारेमा थोरै बताउनेछौं।
1 परिचय: युकेरियोटिक र प्रोकारियोटिक कोशिकाहरू बीचको भिन्नता
2 युकेरियोटिक र प्रोकारियोटिक सेलहरू बीच समानताहरू
3 प्रोकारियोटिक सेल के हो?
3.1 प्रोकारियोटिक सेल को विशेषताहरु
4 युकेरियोटिक सेल के हो?
4.1 युकेरियोटिक सेल को विशेषताहरु
4.2 क्रोमोजोमहरू, तिनीहरू के हुन्?
4.3 युकेरियोटिक कोशिकाहरूको अन्य झिल्ली-बाउन्ड अर्गानेल्स
7 खाली ठाउँहरू
11 सेल भित्ता
परिचय: युकेरियोटिक र प्रोकारियोटिक कोशिकाहरू बीचको भिन्नता
युकेरियोटिक र प्रोकारियोटिक कोशिकाहरू बीचको मुख्य भिन्नता तिनीहरूमा निर्भर गर्दछ आकार र को केही अंगहरू र सेलुलर संरचनाहरूको उपस्थिति वा अनुपस्थिति।
सामान्यतया, हामी यो निर्धारण गर्न सक्छौं युकेरियोटिक कोशिकाहरू ठूला हुन्छन् (१० माइक्रोमिटर भन्दा बढी) र थप जटिल प्रोकारियोटिक सेलहरू भन्दा, जुन आकारमा 10 माइक्रोमिटर भन्दा कम र संरचनामा सरल छ।
El कोर, जहाँ छ ADN जसले सेललाई परिभाषित गर्छ। यो केवल युकेरियोटिक कोशिकाहरूमा अवस्थित हुन्छ, जस्तै साइटोस्केलेटन र अन्य अंगहरू जस्तै माइटोकोन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट र भ्याकुओलहरूमा।
अर्कोतर्फ, जीवनको बाटो स्वतन्त्र युनिसेलुलर जीवहरू को विशेषता हो प्रोकारियोटिक कोशिकाहरू। मा हुँदा युकेरियोटिक कोशिकाहरू केही एककोशिकीय छन् स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न र अरू छन् जटिल बहुसेलुलर जीवहरू.
यी कक्षहरू बीचको भिन्नताको अर्को पक्ष हो प्रजनन। प्रोकारियोटिक कोशिकाहरू सधैं अलैंगिक रूपमा प्रजनन गर्छन्, जबकि युकेरियोटहरूमा त्यहाँ दुई प्रकारका कोशिका प्रजनन प्रक्रियाहरू छन्: अलैंगिक र यौन.
युकेरियोटिक र प्रोकारियोटिक सेलहरू बीच समानताहरू
अघिल्लो बिन्दुमा अवलोकन गरिएका भिन्नताहरूको अतिरिक्त, युकेरियोटिक कोशिकाहरू र प्रोकारियोटिक कोशिकाहरू बीच केही समानताहरू छन् जुन हामी तल उल्लेख गर्न गइरहेका छौं:
दुबै युकेरियोटिक कोशिकाहरू र प्रोकारियोटिक कोशिकाहरू पृथ्वीमा जीवनको आधारभूत र आधारभूत एकाइहरू हुन्। यस तथ्यको कारणले गर्दा, विभिन्न एककोशिकीय र बहुकोशिकीय जीवहरू पृथ्वीमा विभिन्न बासस्थानहरू विकसित र उपनिवेश गर्न सक्षम थिए।
यी दुई कोशिका प्रकारहरू ए द्वारा विशेषता हुन् यसको भित्री भागमा यसको DNA वा आनुवंशिक जानकारी समावेश गर्ने झिल्लीद्वारा विभाजन गरिएको संरचना। र बिभिन्न इन्जाइम्याटिक मेकानिजमहरू जसले तिनीहरूलाई तिनीहरूको महत्त्वपूर्ण कार्यहरू पूरा गर्न अनुमति दिन्छ: फिड, बढ्न र पुन: उत्पादन।
युकेरियोटिक र प्रोकारियोटिक कोशिकाहरू, बाँच्नको लागि र विकास गर्न, तिनीहरू निरन्तर ऊर्जालाई एक रूपबाट अर्कोमा रूपान्तरण गर्छन्। तिनीहरूको वातावरणबाट प्राप्त विभिन्न रासायनिक-जैविक जानकारीको प्रतिक्रियामा तिनीहरूको बाह्यसँग निरन्तर सम्बन्ध कायम राख्नुको साथै।
प्रोकारियोटिक सेल के हो?
यसको नाम ग्रीक शब्दबाट आएको हो "प्रो", जसको अर्थ "पहिले", अन्य युकेरियोटिक सेल प्रकारहरूको उपस्थिति हुनु अघि यसको अस्तित्वलाई बुझाउँछ। यदि हामीले जीवहरूको विकासको इतिहासलाई हेर्छौं भने, प्रोकारियोटिक कोशिकाहरू सबैभन्दा विविध कोशिकाहरू हुन् र सबैभन्दा सरल र पुरानो पनि हुन्।
पृथ्वीमा लगभग सबै बासस्थानहरूमा बस्ने विभिन्न प्रोकारियोटिक कोशिकाहरू राज्यसँग सम्बन्धित छन् मोनेराजुन ब्याक्टेरिया (युब्याक्टेरिया) र पुरातात्विक (धनुष).
प्रोकारियोटिक सेल को विशेषताहरु
भित्र हेर्न को लागी प्रोकारियोटिक कोशिकाहरू तपाईले यसलाईaसँग गर्न आवश्यक छ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, किनभने यो उच्चतम रिजोलुसन भएको एक हो। प्रोकारियोटिक कोशिकाहरूको सबैभन्दा सरल र सानो संरचना हुन्छ। प्रोकारियोटिक सेलको भित्री भागमा आधारित छ:
प्लाज्मा झिल्ली। सबै कोशिकाहरू जस्तै, यो झिल्लीले घेरिएको छ। यसमा lamellae भनिने तहहरू हुन्छन्। यस संरचनाले कोशिकालाई तिनीहरू मार्फत अन्य जीवहरूसँग सामान्य पदार्थहरू आदानप्रदान गर्न उच्च क्षमता दिन्छ।
मेसोसोमहरू। प्लाज्मा झिल्लीको आक्रमण, जुन कोशिका विभाजनसँग सम्बन्धित छ।
सेल भित्ता। यो सेलको बाहिरी तह हो, र यसलाई सुरक्षा दिन्छ।
साइटोप्लाज्म। यो सेल भित्रको आन्तरिक वातावरण हो। यो एक पानी चिपचिपा प्रकृति छ। यो जहाँ सेल को organelles र रासायनिक अणुहरु स्थित छन्।
न्यूक्लियोइड। साइटोप्लाज्मको सबैभन्दा घना क्षेत्र जहाँ सेलुलर डीएनए, वा आनुवंशिक सामग्री पाइन्छ। युकेरियोटिक कोशिकाहरूमा जस्तो नभई, यहाँको डीएनए कोषका अन्य भागहरूबाट अलग हुँदैन।
Ribosomes। यी संरचनाहरूमा प्रोटीन जस्ता अणुहरू बनाउने कार्य हुन्छ। तिनीहरू cytoplasm मा मुक्त हुन सक्छ, वा गठन समूह (polyribosomes)।
Cilia, flagella वा fibrils। तिनीहरू सेलको बाह्य संरचना हुन्, जसले तिनीहरूलाई सार्न अनुमति दिन्छ।
Su आकृति विज्ञान यो परिवर्तनशील छ (गोलाकार, सर्पिल वा रड, आदि)। र तिनीहरूको प्रजनन को प्रकृति हो अलैंगिक, जसले तिनीहरूलाई धेरै चाँडै विभाजित गर्न निम्त्याउँछ।
युकेरियोटिक सेल के हो?
युकेरियोटको अर्थ ग्रीकबाट आएको हो, जहाँ "यूरोपीय संघ" अर्थ "सत्य" र "karyon" अर्थ "कोर"। यस तरिकाले, मुख्य विशेषताले परिभाषित गर्दछ Eukaryotic सेल छ साँचो नाभिकको उपस्थिति यसको सेलुलर संरचनामा, जसले कोषको डीएनएलाई व्यवस्थित र परिभाषित गर्छ। ठूला हुनुको अतिरिक्त, तिनीहरू तिनीहरूको आकार विज्ञान र प्रकार्यमा अधिक जटिल छन्।
युकेरियोटिक सेल को विशेषताहरु
युकेरियोटिक कोशिकाहरूको विशेषताहरू हामीले फेला पार्छौं कि तिनीहरूसँग अर्गानेल्सको व्यापक र जटिल प्रणाली छ। केही अंगहरू जनावर वा बिरुवा कोशिकाहरूका लागि मात्र हुन्, र अरूहरू दुवैमा सामान्य हुन्छन्।। अर्को, हामी मुख्य उल्लेख गर्न जाँदैछौं:
प्लाज्मा झिल्ली। कक्षको बाहिरी सीमाना। यसको कार्य कोशिकाको बाहिरी र भित्री भागहरू बीच अणुहरू र रासायनिक पदार्थहरूको आदानप्रदान हो। यो फस्फोलिपिड्स र प्रोटिनको दोहोरो तहबाट बनेको हुन्छ। त्यहाँ दुई प्रकारका झिल्ली प्रोटीनहरू छन्:
- ट्रान्समेम्ब्रेन प्रोटीन: लिपिड बिलेयरलाई छेउबाट छेउमा पार गर्दै। तिनीहरूसँग विभिन्न कार्यहरू छन्, उदाहरणका लागि, सेल बाहिरबाट पदार्थ र अणुहरूको यातायात।
- परिधीय प्रोटीन: तिनीहरू केवल सेलको भित्री वा बाहिरी पक्षसँग सञ्चार गर्छन्।
सेल न्यूक्लियस। यो जहाँ कोशिकाको डीएनए वा आनुवंशिक सामग्री पाइन्छ। यो परमाणु झिल्ली द्वारा साइटोप्लाज्मबाट अलग गरिएको छ, यो दोहोरो छ।
आणविक झिल्ली। यो संरचना हो जसले कोशिका न्यूक्लियसलाई बाँकी साइटोप्लाज्मबाट अलग गर्दछ। यसमा परमाणु पोर्स भनिने प्वालहरू छन्, जसले अणुहरू आदानप्रदान गर्न अनुमति दिन्छ।
न्यूक्लियोलस। यो न्यूक्लियस को भित्री भाग हो। यो राइबोसोमहरू बनाउने अवयवहरूको निर्माणको लागि जिम्मेवार छ।
क्रोमोजोमहरू, तिनीहरू के हुन्?
तिनीहरू न्यूक्लियस भित्र पाइन्छ, र sDNA बनाउने एकाइहरु संग। कोर मा कुण्डल छन् हिस्टोन (प्रोटिन) र ADN यसरी गठन क्रोमेटिन.
कोशिकाको जीवन चक्रको अधिकांश समयमा, क्रोमाटिन सुप्त अवस्थामा हुन्छ। तर केहि बिन्दुमा, यो ट्विस्ट र कम्प्याक्ट हुन थाल्छ। डीएनए आफैं र प्रोटिनहरू यति धेरै पटक लपेट्छ कि यो ठोस जस्तो देखिन्छ। यो यस्तो छ कि तपाईंले तारको एक मिटर लिनुभयो र यसलाई सकेसम्म बलियोसँग लपेट्न थाल्नुभयो। तिनीहरू एक सानो, धेरै कम्पैक्ट बलको साथ समाप्त हुन्छन्। यो नयाँ कम्प्याक्ट अवस्थामा, क्रोमाटिन धेरै कम्प्याक्ट निकायहरूमा पुन: संगठित हुन्छ भनिन्छ क्रोमोजोमहरू.
त्यसैले, DNA बाट बनेको, आनुवंशिक जानकारी समावेश गर्दछ। उदाहरणका लागि, एउटा क्रोमोजोममा तपाईंले कपालको रंगको बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ, अर्कोमा यो शरीरको लम्बाइको बारेमा जानकारी हुन सक्छ, र यस्तै अन्य।
प्रत्येक जीवले विभिन्न आनुवंशिक जानकारी समावेश गर्दछ, र क्रोमोजोमहरूको संख्या एक प्रजातिको विशिष्ट हुनेछ।। मानिसमा, हाम्रो शरीरको प्रत्येक कोशिकामा 46 क्रोमोजोमहरू हुन्छन्। चिम्पान्जीका नजिकका आफन्तहरूको कोषमा ४८ वटा क्रोमोजोम हुन्छन्। यो ध्यान दिन लायक छ कि युकेरियोटिक कोशिकाहरूमा, क्रोमोजोमहरूको संख्या सधैं बराबर हुन्छ। त्यहाँ क्रोमोसोमका दुई समान सेटहरू छन्, र एउटै आकार, आकार, र आनुवंशिक जानकारी भएका क्रोमोजोमहरूलाई जोडीहरूमा समूहबद्ध गरिन्छ भनिन्छ। होमोलोगस क्रोमोजोम वा होमोलोगस जोडीहरूको जोडी।
युकेरियोटिक कोशिकाहरूको अन्य झिल्ली-बाउन्ड अर्गानेल्स
La भित्री झिल्ली युकेरियोटिक कोशिकाहरूले विभिन्न कार्यहरू हुने विभिन्न वातावरणहरू निर्धारण गर्दछ। यो एउटा कारखाना जस्तै हो, दक्षता बढाउन विभिन्न ठाउँमा कार्यहरू गर्दै। झिल्ली-बाउन्ड अर्गानेल्सहरू मध्ये एक हो एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम (ER)। यो एक भूलभुलैया को उपस्थिति छ, र यसको झिल्ली न्यूक्लियस संग सम्बन्धित छ। राइबोसोमसँग सम्बन्धित जाली क्षेत्रहरू भेद गर्नुहोस्।
को ribosomes तिनीहरू जालीदार झिल्लीको बाहिरी सतहमा टाँस्छन्, यसलाई नराम्रो वा दानेदार रूप दिन्छ। राइबोजोमसँग सम्बन्धित जालीदार क्षेत्र, जसमा प्रोटिन बनाउने कार्य हुन्छ, भनिन्छ रफ वा दानेदार एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम (RER वा REG)। जालीको जुन भागमा राइबोसोमहरू हुँदैनन् त्यसलाई भनिन्छ स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम (SER) र, अन्य चीजहरू बीच, यसमा लिपिडहरू निर्माण गर्ने कार्य छ।
El गोलगी कम्प्लेक्स यो अर्को अर्गानेल हो जुन स्ट्याक्ड झिल्ली थैली जस्तो आकारको हुन्छ। आरईआरमा उत्पादन भएका केही प्रोटिनहरू यहाँ आइपुग्छन् र परिमार्जन हुन्छन्। उत्पादनहरू विभिन्न गन्तव्यहरूमा जान्छन्: गोलगी उपकरण कोशिकाहरूद्वारा उत्पादित प्रोटिनहरूको ढुवानीको पर्यवेक्षक हो.
केही प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा जान्छन्, केही प्रोटिनहरू अन्य कोशिकाहरूमा निर्यात हुनेछन्, जबकि अरूलाई सानो झिल्ली थैलीहरूमा प्याक गरिनेछ। पुलिका। The लाइसोसोमहरू तिनीहरू गोलगी कम्प्लेक्समा बनाइएका विशेष प्रकारका भेसिकलहरू हुन् जसमा इन्जाइमहरू हुन्छन् जसले कोषहरूमा प्रवेश गर्ने जैविक अणुहरूको ह्रासमा भूमिका खेल्छ। यो प्रक्रिया भनिन्छ सेलुलर पाचन.
उनीहरूले घेरिएका ए डबल झिल्ली। माइटोकोन्ड्रियाको भित्री झिल्लीमा धेरै तहहरू छन् जसलाई भनिन्छ लहरहरु। मा माइटोकोन्ड्रियल म्याट्रिक्स अणुहरू पाइन्छ DNA र ribosomes। माइटोकोन्ड्रियामा, रासायनिक प्रतिक्रियाहरू गरिन्छ जसले अक्सिजनको उपस्थितिमा जैविक अणुहरूबाट रासायनिक ऊर्जा उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ। यो ऊर्जाले कोशिकाको सबै महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरूलाई निरन्तरता दिन्छ।
केवल बिरुवा कोशिकाहरूमा अवस्थित छ। यसमा बाहिरी झिल्ली, भित्री झिल्ली र तेस्रो प्रकारको झिल्ली हुन्छ जसलाई समतल थैली भनिन्छ। thylakoids तिनीहरू स्ट्याक्ड प्लेटहरू जस्तै देखिन्छन्। यी प्रत्येक स्ट्याक भनिन्छ ग्राना। थाइलाकोइड्स पाइन्छ क्लोरोफिल, एक हरियो वर्णक जसले प्रक्रिया लिन अनुमति दिन्छ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया।
तिनीहरू झिल्लीदार vesicles हुन् जनावर र बिरुवा कोशिकाहरु मा उपस्थित। यद्यपि, तिनीहरू छन् बिरुवा कोशिकाहरु मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। सम्म कब्जा गर्न सक्छन् साइटोप्लाज्म को 70-90%। सामान्य सर्तहरूमा, यसको प्रकार्य भण्डारण हो।
तिनीहरू दुई उपयुनिटहरू (मुख्य र माइनर) बाट बनेका अर्गानेल्स हुन् जुन न्यूक्लियोलसमा उत्पन्न हुन्छ, र एक पटक साइटोप्लाज्ममा, तिनीहरू आफ्नो कार्यहरू गर्न जम्मा हुन्छन्। राइबोसोमहरू हुन् प्रोटिन उत्पादन वा संश्लेषणको लागि जिम्मेवार। तिनीहरूले तिनीहरूलाई साइटोप्लाज्ममा छोड्छन् वा RER को सतहमा बाँध्छन्।
युकेरियोटिक कोशिकाहरूको साइटोप्लाज्ममा, साइटोस्केलेटन बनाउने फिलामेन्टहरूको छुट्टै सेट हुन्छ, र यी फिलामेन्टहरू हुन्। सेल आकार कायम राख्न र ठाउँमा organelles राख्न आवश्यक छ। यो एक धेरै गतिशील संरचना हो किनकि यसले निरन्तर संगठित र विघटन गरिरहेको छ, कोशिकाहरूलाई आकार परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ (उदाहरणका लागि, सार्नका लागि) वा अर्गानेलहरू साइटोप्लाज्म भित्र सार्नको लागि।
तिनीहरू फिलामेन्टहरू द्वारा बनाइएका दुई संरचनाहरू हुन् र जनावर कोशिका को cytoplasm मा पाइन्छ। तिनीहरू सेल विभाजनमा संलग्न छन्।
बिरुवा कोशिकाहरु को लागी अद्वितीय। यो प्लाज्मा झिल्ली बाहिर स्थित छ र सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यसको संरचना प्रोकारियोटिक कोशिकाहरूको सेल पर्खाल भन्दा फरक छ। कोषको पर्खालमा केही यौगिकहरूको जम्माले बिरुवाका भागहरूलाई दिन्छ कठोरता र कठोरता को विशेषताहरु, उदाहरण को लागी, रूखहरु को ट्रंक।
मलाई आशा छ कि यो जानकारी तपाईका लागि उपयोगी भएको छ, र तपाईले प्रोकारियोटिक र युकेरियोटिक कोशिकाहरू बारे थप जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: पोस्टपोस्ट » सेल जीवविज्ञान » प्रोकारियोटिक र युकेरियोटिक कोशिकाहरू